Dugsiga Ayeeyooyinka Dhigtaan - Xogside
Home BARNAAMIJYADA DEEQAANKA Dugsiga Ayeeyooyinka Dhigtaan
Dugsiga Ayeeyooyinka Dhigtaan
Kanta More waa islaan Ayeeyo ah oo 60 sano jirtay waxaana ay subax kasta ku kalahdaa dugsiga ay dhigato Ajibainchi Shala oo ku yaalla duleedka Magaalada Mumbai ee dalka Indiya. Waxay aaminsantahay odhaahda ah “ Ma jirto da’ lagu dhameeyo waxbarashada, oo aan mar danbe lagu laabanayn”. Waxaana ay tidhi “ Qof kasta wax yar ayuu bartay, waa inaad wada aqoonta ilaa dhimashada”.
Kanta oo gashan dharka lebiska u ah dugsiga oo shandeeda ku sidata dhabarka isla markaana la socoto gabadh kale oo dugisaga ah ayaa dugisaga ku socda. Waxaana ay qaadayaan heesaha dugsiga lagu furo subaxa hore.
Dugsigan waxa loo dhisay Ayeeyoonka si ay waxbarshada u sii wataan isla markaana u dhameeyan ugana gaadhaan heer jaamacadeed.
Dugsigan oo ku yaalla tuulada Fangane ee Thane (Mumbai) ayaa sida warbixinta PTI lagu sheegay dugsiga waxa dhigta Ayeeyoyin iyo moocayo da’doodu u dhaxayso 60- 90 sano, kuwaasi oo si joogto ah u taga waxna u bartay. .
Dugsiga ayaa ujeedadiisu loo asaasay kor looqaadu waxbrashada islaamaha da’da madaama goobtan ay ku badan yihiin beeruhu.
Previous articleSida nafta loogu hago fikirka wanaagsan ?
Next articleWaxay Badbaadisay Ciidankeeda!